रमेश दियाली - साप्ताहिक
रमेश दियालीका लेखहरु
रमेश दियाली, असार ३१, २०७४
‘ल दबाई खाने समय भयो ? उठ्नुहोस् ।’ मेरो आवाज सुनिन् कि क्या हो ? आँखा खोलिनन् मेमले । सायद मेरो भाषा बुझिन् होला । ‘मेम, इट्स टाइम फर मेडिसन ?’ अहँ, पटक्कै उठिनन् ।
रमेश दियाली, आश्विन २०, २०७३
केहि यस्ता सम्बन्धहरू छन् जुन चाहेर पनि मेटिदैन । बाँचिरहन्छन् जीन्दगीभरि, अनन्त सम्म । एउटा अमर छाप बनेर । ढुंगामा खोपिएको अक्षर झैं । सम्बन्ध त हाम्रो बिचार, भावनाले पो बनाउँदो रहेछ । ‘अल बिदा अनु ।’ ‘आत्माले शान्ती पाओस् ।’ सिगरेट सल्काउँदै गर्दा फेसबुक साईन आउट् गरें ।